काठमाडौं (अस) । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भदौ २१ देखि २४ गतेसम्म पोखरामा ‘ब्रान्च म्यानेजर्स कन्फरेन्स एन्ड एजेन्सी फ्यालिसिटेशन प्रोग्राम २०७६’ गरेको छ । कम्पनीले उक्त कार्यक्रममा उत्कृष्ट एजेन्ट, एजेन्सी म्यानेजर, शाखा कार्यालय, उपशाखा कार्यालय र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई नगदसहित पुरस्कार पनि वितरण गरेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले गरेका थिए । कम्पनीले उक्त समारोहमा आगामी दिनका लागि स्ट्राटेजी निर्माण गर्नुका साथ विभिन्न उत्पे्ररणात्मक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि गरेको थियो ।
कार्यक्रममा कम्पनीले एजेन्टतर्फ ५० र एजेन्सी म्यानेजरतर्फ ५० जनालाई नगदसहित पुरस्कृत ग¥यो । कार्यक्रममा ‘एजेन्सी म्यानेजर अफ इयर’ अवार्डका लागि पहिलो हुने बिर्तामोड शाखाकी निर्मला खत्रीले रू. ३ लाख ३३ हजार, दोस्रो हुने नयाँ बानेश्वर शाखाकी दुर्गाकुमारी खत्रीले रू. १ लाख ८० हजार र तेस्रो हुने बिर्तामोड शाखाकै वेदनारायण गोदारले रू. १ लाख पाए । एजेन्टतर्फ ‘एजेन्ट अफ द इयर’ अवार्डका लागि पहिलो हुने नयाँ बानेश्वर शाखाका अच्युत पौडेलले रू. ३ लाख ३३ हजार, दोस्रो हुने बिर्तामोड शाखाकी प्रमिला बस्नेतले रू. १ लाख ८० हजार र तेस्रो हुने बूढानीलकण्ठ शाखाका नैनबहादुर खत्रीले रू. १ लाख प्राप्त गरे । त्यस्तै, कर्मचारीतर्फ ‘बेस्ट पर्फमेन्स अफ द इयर’ अवार्ड विर्तामोड शाखाका अमेन्द्रकुमार कर्ण र ‘वेस्ट
रिजनल म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्ड पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रबन्धक टीकादत्त प्याकुरेललाई प्रदान गरिएको छ ।
नेपालको जीवन बीमा बजारको लगभग ३२ प्रतिशतभन्दा बढी बजारहिस्सा ओगटेको यस कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी तथा एजेन्टलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष सम्मान तथा उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको इन्स्योरेन्स क्षेत्र विस्तारकै क्रममा रहेकाले कम्पनी देशैभर शाखा थपको रणनीतिमा रहेको बताए ।
हाल यस कम्पनीको चुक्तापूँजी नेपालको जीवन बीमाक्षेत्रकै सर्वाधिक रू. ५ अर्ब ४९ करोड रहेको छ भने लगानी रू. ७२ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कम्पनीको जीवन बीमा कोष रू. ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । १ लाख २८ हजारभन्दा बढी प्रशिक्षित अभिकर्ता रहेको यस कम्पनीले देशभर करीब १८४ भन्दा बढी शाखा तथा उपशाखामार्फत बीमासम्बन्धी सेवा दिइरहेको छ । हालसम्म स्वदेश र विदेश गरी २६ लाख ३० हजार बढी व्यक्ति यस कम्पनीमा बीमित भइसकेका छन् ।
भारतको ७१औं गणतन्त्र दिवस : नेपाललाई एम्बुलेन्स र बस हस्तान्तरण[२०७६ माघ, १३]
ई–सेवा ११औं वर्षमा [२०७६ माघ, १३]
महँगिए माटाका मूर्ति[२०७६ माघ, १३]
फोहोरबाट बनाएका सामग्री प्रदर्शन[२०७६ माघ, १३]
कोशी महोत्सवमा १ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य[२०७६ माघ, १३]